oo dhan macdan qodayaasha ma noolaan doonaa Seeraar yareynta kharashka - Blockchain News
Intee in le'eg oo waa Seeraar kharashka sidaas macdanta in mar kale uu noqonayaa faa'iido?
A 70% Dhibic in qiimaha Seeraar oo ka dhexe ee December ficil ahaan hoos faa'iidada ah ee macdanta. Iyada oo heerka qiimaha maanta, dhacaya in ugu yaraan $ 6,048, ee macdan qodayaasha ugu weyn oo keliya sabbaynaya joogi kartaa. Laakiin falanqaynta ee Bloomberg ayaa muujinaya in xitaa ka mid ah ciyaartoyda waaweyn oo dhan ma noolaan karaa.
maanta, 67% oo ka mid ah macdanta tamarta waxaa ku urursan gacmaha afar barkadaha: BTC.com, AntPool, SlushPool iyo BTC.top. Laakiin falanqeeye Bloomberg Tim Kulpan sheegayaa: “Haddii aadan shirkadda maamusha ay goobaha macdanta dhaqsiyaha badan iibsaday at qiimaha jumlada, ka dibna ay u badan tahay aad laga badiyay lacagta.” December ee u kaca kordhay suuqa macdanta by 40%, taas oo keentay in dheelitir la'aanta ah ee habka: sida ay Blockchain.info, Waxay ahayd 51% adag tahay in la soo saaro block.
Ayaa koray labada kakanaanta ee xisaabinta iyo qadarka tamarta wada baabbi'iyey. Haddii Seeraar joojiyay at 50-maalin dhaqaaqin celceliska $ 13,200, ka dibna iyadoo ay hadda iyo tirada hashes, qode celceliska qalab wanaagsan heli lahaa $ 80 toddobaadkii (laakiin ka weyn ee qalabka, ka faa'iido hoose). Si kastaba ha ahaatee, xataa goobaha macdanta Seeraar-ugu horumarsan ma difaaco khatarta ah in lacag laga badiyay, marka qiimaha maratay dhibciyo, iyo qode ku joogo shabakadda: macdan qodayaasha silco khasaaraha bilaabo barta qiimaha of a $ 6,800.
Haddii qiimaha kama kici, markaas qode celceliska lumin doonaa $ 3 toddobaadkii. barkadaha Macdanta, sida AntPool, sii joogi kartaa in dhul wanaagsan, laakiin ay faa'iido u noqon doonaa 90% hoose ka badan 50-maalin celcelis guuraha ah $ 13,200.
Tim Kulpan qaabeeyey oo kaliya, in uu ra'yi, xaaladda, taas oo macdanta mar kale uu noqon doonaa mid faa'iido: koritaanka Seeraar la sii daayo khasab ah qayb ka mid ah macdan qodayaasha ka ciyaarta si loo yareeyo tartan. oo ah falanqeeye waa hubi in ay ka qaybgalayaashu oo dhan maanta ma awoodaan in ay ka fogaadaan khasaare noqon doonaa: labada qof ka xoreyn doono “Markab macdanta” ka miisaan, ama qof kasta qarqin doonaa.
Haddii aad tahay qof gaar ah oo aad rabto inaad qodistani Seeraar iyo kuwa kale Cryptocurrency, waxaa fiican inaad u samayso iyada oo Cloud Macdanta, lacag takhasuska oo wuxuu ku raaxaysan faa'iidooyinka in shirkadaha waa weyn ka heli. Halkan waxaa ku qoran sare ee 3 shirkadaha for Cloud Macdanta: Hashflare, IQMining ama Genesis Macdanta
Haddii Maal ah ayaa f ...
Paxos shirkadda crypto ...
Seeraarblock silsiladdaruur macdantaqodemacdantanews
Post Previous:Kaliya afar bedasha Crypto adeeca shuruudaha jaangooyaha ee South Korean
Post Next:Technologies New Ma imaanshaha Xalliyaan Scalability Seeraar ayaa